Mirary soa an'ireo mambra ny governemanta rehetra
jeudi, 30 janvier 2020 00:09
Na ireo efa teo aloha, na ireo vaovao, dia tolorana firariantsoa feno avokoa.
Ny ahy tsy miova ny hevitro, aza manao politikan'ataka, tsara be ny fakana ireo manam-pahaizana maneran-tany, fa aza ny politikan'ny vahiny no atao modely, fa aoka hiainga amin'ny zava-misy eto amintsika, ny toe-tsaina sy ny kolotsaintsika.
Tsy ianareo no atoro satria olona manana ny maha izy azy avokoa ianareo voatendry, notsongaina tao anatin'ny maro.
Apetrao ny tena fampandrosoana ny faritra tsirairay, omeo andraikitra izy.
Ohatra tsotra, omeo ny Ben'ny tanàna an'Antananarivo ny fahefana rehetra ampandrosoany an'Antananarivo Renivohitra, na ny fanaovana ny fotodrafitrasa ilaina io, na ny sekoly, na ny fandriampahalemana, na ny làlana, na ny hetra, ary omeo azy ny vola ampidirin'Antananarivo. Tompon'andraikitra feno izy amin'izay, ka tsy misy ny hifanilika amin'ny mety tsy ho fahombiazana.
Aoka hiainga amin'ny harena ananantsika isika, fa tsy hiazakazaka hitady mpamatsy vola etsy sy eroa, izay miteraka fahasorenan'ny maro, satria izy tsy rarahiana, nefa ny hafa mahazo tombontsoa. Tsy midika izany fa tsy ilaina ny mpandraharaha vahiny, na hitoka-monina isika, fa omeo toerana ny mpandraharaha sy ireo Tanora Malagasy maro aman'etsiny, eny an-tapitrisany.
Efa ananantsika ny vola hiaingantsika, aza mangataka.
Lazaina fa fanetribem-pirenena ireo mpandraharaha momba ny hazo, indrindra fa ny bois de rose.
Nefa isika efa manana 5000 conteneurs efa tapaka, ary nomena fanomezan-dalana ara-dalàna ireo mpandraharaha ireo, hazo efa voaisa niaraka tamin'ireo vahiny milaza fa mpiaro ny tontolo iainana.
Mitetina 2 milliards de dollars (7 000 miliara ariary) izany raha amidy. Vola efa eo an-tanana izany, amidy androany, tsy misy 1 volana dia azo io vola io, ny asa miainga.
Nefa ilaozantsika manambitamby ary mangataka 100 millions de dollar any aman'olona any ivelany any, ary manenjika indray aza ireo mpandraharaha Malagasy ireo.
Manana volamena isika, manana tany midadasika isika, aza omena olona fa omeo ny tanora toa anareo, ampio izy, vatsio fitaovana, resin'ireo ny Arabo sy Sinoa.
Efa manana solika isika, efa misy 160 000 barils d'huile lourdes eo antokotanin'ny Tsimiroro, tsy ao ambany tany intsony fa efa anaty Cuve sy baril, ampiasao, azo ampiasaina ho an'i Jirama io, ianareo manam-pahaizana aza manaiky rebireben'olona amin'ny tombotsoany manokana ka hilaza fa tsy mety ireo.
Omeo fampianarana ny ankizy sy ny tanora, aza atao ambanin-javatra ny sekoly, ataovy maimaimpoana ny fampianarana rehetra, aza asiana sivana rehefa afa-panadinana izy.
Omeo fahasalamana ny Malagasy, azo atao tsara ny maka ny (1+5)% vola alaina amin'ny mpiasa sy mpampiasa, dia iny no miantoka ny fanafody sy fitsaboana azy, hitaro amin'ny tantsaha sy ny mpiasa tena ary ny mpivarotra ireny.
Jereo ny ohatra tsara ataon'ny OSTIE na ireo mitovy aminy, mety misy fanatsarana, ekena izany, fa mivaingana ny soa azo avy aminy, ananany avokoa ireo fitaovana moderina fitiliana, mahazo fanafody ara-dalàna sy fitsaboana.
Omeo lanja ny fitsaboana ireo aretina mavesatra, toa ny cancer, diabète, ny foie, rein, paludisme, Polyo.
Ny fandriam-pahalemana, dia nisy asa mivaingana vitan'ny ekipa teo aloha, ary rariny raha tohizana izany. Aza avela andrabiraby ny firenena ireo dahalo, izay tsy manana fitaovana firy mihoatra amin'ny Foloalindahy, ireo ve no ampihorohoro eto, zaho manokana dia tsy mijery izay zon'olombelona izany raha tena dahalo mpamono olona sy mpandroba izany. Ny zon'ny Malagasy te hiaina ampilaminana no jereko.
Tsara anefa ny amoronana asa ho an'ny rehetra mba tsy ho mora voasarika amin'ny ratsy ny tanora, ka dia mivarolavo amin'ny fidorohana sy ny fisotroana toaka. Ampidiro Service National Obligatoire avokoa ireo tanora tsy manana asa.
Misarika ny saina amin'ity fisian'ny bar sy fisotroana toaka ity, mila foanana ny sasany amin'izy ireny, ka soloina sekoly sy kianja fanaovana fanatanjahan-tena isaky ny quartier sy fokontany.
Jereo ny fiarovana ny sisin-tanintsika, ny ranomasina sy ny harena ao aminy. Sehetra iray tena ampandroso antsika io raha hay ny miaro sy mampiasa azy.
Torak'izay koa ny fampandrosoana ny faritra rehetra, amboaro ny teti-bolampanjakana:
Raha apetrakareo io, tsy misy hiady ny sezanareo, na ireo nanohana mafy ny Filoha nefa mety mahatsiaro tena tsy hita amin'ity tantara ity, na ireo mpanohitra izay mahatsiaro voahilika sy tratran'ny ramatahora lava.
Ny zava-dehibe dia misy 85% n'ny vahoaka Malagasy no tsy nifidy ny mpitondra ankehitriny, na izy nipetraka tany an-trano nidongy, na nanao zavatra hafa hitany mety kokoa, na izy nifidy olon-kafa.
Jereo ireo, fa io no mimenomenona mangina tsy hitan'ny maro.